“ဆုံစည်းပါရစေ” အပိုင်း(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “ဆုံစည်းပါရစေ” အပိုင်း(၂)
- aung nainglin
Posted by aung nainglin on Jun 15, 2012 in Copy/Paste |3comments
“ကန်ထဲကို မထွက်တော့ဘူး…………..လုပ်ထားအုံးပေါ့ကွာ မင်းအလှည့် ဆိုတော့လဲလုပ်ထားအုံးပေါ့…………..”
သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့လဲ ဘယ်လိုလုပ်ငြင်းလို့ ကောင်းပါ့မလဲ။ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေဆိုလို့တစ်ယောက်ပဲရှိတာ ကောင်းတူဆိုးတူငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ဖြစ်နေတော့လဲ မလိုက်ရောလို့ မဖြစ်ဘူးလေ ချစ်သူငယ်ချင်းလေးစိတ်ဆိုးသွားရင် ချော့ရခက်မယ်မဟုတ်လား။ သူတို့ နှစ်ယောက်က အရမ်းချမ်းသာတဲ့ သူတွေမဟုတ်ကြပေမဲ့နိမ့် ပါးတဲ့ သူတွေထဲမှာလဲမပါဘူးလေ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူငယ်ချင်းလေး ခေါ်ရာနောက်ကို လိုက်ခဲ့ သည်လေ။ ချစ်သူ အသစ်တိုင်း သူ့ ကိုမိတ်ဆက်ပေးတက်တာ သူငယ်ချင်းထွန်းဇော်၇ဲ့ အကျင့် ပဲလေ။
နှစ်ယောက်သား ကန်တော်ကြီးထဲကိုရောက်တော့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲသို့ ဝင်လိုက်ကြလေသည်။ ၀ိတ်တာကောင်လေး စားပွဲဝိုင်းသို့ ရောက်လာတော့………..
“လုပ်ပေါ့ကွာ…..မင်းက အခုချိန်မှာအပေါ်က ဖြစ်နေတာကိုကွ…………”
“အဲ့ ဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ ကွာ…….ခဏလေးပါ……”
“တော်သေးတာပေါ့ကွာ……..ငါက နေ့ လည်၁၁နာရီလောက် လာမယ်မှတ်တာ…..၉နာရီက ထိုးတော့မှာဆိုတော့ ဆက်စောင့်ရမှာပေါ့…..”
“ကိုတို့ ရောက်နေတာကြာပြီလား…သဲ…..တုိ့ နဲနဲနောက်ကြသွားတယ်….စောရီးနော်…….”
“ရပါတယ် သဲရယ်….ကိုတို့ လဲ အခုမှရောက်တာပါ……”
“အစ်ကိုတို့ဘာသုံးဆောင်မလဲခင်ဗျာ……………”
“သဲ ဘာစားမလဲမှာလေ…..သဲရဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလဲ တစ်ခုခုမှာမှာခိုင်းလိုက်လေ ဘာမှမစားလာခဲ့ ရသေးဘူးမလား……”
“ကျမကို ကော်ဖီတစ်ခွက်ပေးပါ….နို့ ဆီသိပ်မထဲနဲ့ …..”
“ညီလေး အစ်ကို့ ကို ထမင်းကျော် တစ်ပွဲ ကြက်သားနဲ့ ပေးကွာ….မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးနော်….”
၀ိတ်တာကောင်လေး ထွက်သွားတော့ထွန်းဇော်က စကားစပြောလေတော့သည်……….
“သဲ သူက ကို ယ့် ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း သက်ပိုင်တဲ့ …………..”
“တွေ့ ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ကိုသက်ပိုင်…….ကျမ နာမည်က သဲနုပါ..သူကတော့ ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်း သွန်းဖြူသင်းပါ…..”
“ဟုတ်ကဲ့တွေ့ ရတာဝမ်းသာပါတယ်……………လမ်းမှာတွေ့ လဲခေါ်ပေါ့ဗျာ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားပြီပဲ ခင်ခင်မင်မင်ပေါ့…….”
“ဟုတ်ကဲ့ …..ဒါနဲ့ကိုသက်ပိုင်ကို သဲနုတစ်ခုလောက်မေးလို့ ရမလား……”
“အဆိုတော် သက်ပိုင်ဆိုတာ အစ်ကိုလား………….”
“ဟင်…ဘယ်လိုကြီးလဲ…..တစ်ယာက်က ဟုတ်တယ် နောက်တစ်ယောက်က မဟုတ်ဘူးတဲ့ ……..ဘယ်ဟာကိုအမှန်ယူရမှာလဲ……”
“အော်….ဒီလိုပါထွန်းဇော်ပြောတဲ့ ဟုတ်တယ်ဆိုတာ အစ်ကိုက သီချင်းဆိုတက်တယ်လို့ ပြောတာာပါ……အစ်ကိုပြောတဲ့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အဆိုတော် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတာပါ……”
“အော်…ဒါနဲ့သဲနုကို ခင်သလို သဲနုရဲ့ သူငယ်ချင်း သွန်းကိုလဲ ခင်နိုင်ပါတယ်……”
လှလိုက်တာကောင်မလေးရယ် ဘယ်ပန်းချီရေးဆွဲလို့ မမှီတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လေးပါပဲကွာ။ မျက်နှာသွယ်သွယ်လေးကို လှသထက်ပိုလှအောင်ကူညီနေတဲ့အနက်ေ၇ာင် မျက်ခုံးထူထူလေးဟာ လိုက်ဖက်ညီအောင်လှနိုင်ရက်ပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးကတော့ စူးရှတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံရယ် လေးညို့ တံလိုကွေးကောက်နေတဲ့ နိုတ်ခမ်းလွှာ တစ်စုံ၇ယ်ပါပဲ။ အားလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ ပန်းချီဆရာတွေငိုလောက်တဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးပါပဲ။ ကောင်မလေးရယ် မင်းနဲ့ဆုံစည်းခွင့် သာရခဲ့ မယ်ဆိုရင်…….
ရှေ့ သို့ ဆကိပါအုံးမည်……ခင်မင်လေးစားလျှက်…………….။………………………..
About aung nainglin
aung nainglin has written 26 post in this Website..
View all posts by aung nainglin →
သဲနု ဆိုတာ ဖတ်ရလို့ ၊ ကျုပ်တို့ ရွာထဲက “သဲနုအေး” တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော် ။
ရွာထဲက ကျုပ် သဲနုလေး ကို တော့ မထိဘာနဲ့ ဗျာ ။
မျက်နှာသွယ်သွယ်လေးကို လှသထက်ပိုလှအောင်ကူညီနေတဲ့အနက်ေ၇ာင် မျက်ခုံးထူထူလေးဟာ လိုက်ဖက်ညီအောင်လှနိုင်ရက်ပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးကတော့ စူးရှတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံရယ် လေးညို့ တံလိုကွေးကောက်နေတဲ့ နိုတ်ခမ်းလွှာ တစ်စုံ၇ယ်ပါပဲ။ အားလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ ပန်းချီဆရာတွေငိုလောက်တဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးပါပဲ။
aung nainglin says:
အစ်ကိုတို့ရွာထဲက သဲနုအေး မဟုတ်ပါဘူး…..
တိုက်ဆိုင်သွားရင်တော့ ခွင့် လွှတ်ပေးပါနော်